Paypal - कसरी सुरक्षित अनलाइन खरीद गर्न यसको प्रयोग गर्ने सजाउनुहोस्
कसरी सुरक्षित ऑनलाइन खरीद गर्न पेपैल को उपयोग गर्ने
सुसाना Godoy | | सजाउनुहोस्
तपाई चाहानुहुन्छ अनलाइन खरीदहरू धेरै सुरक्षित गर्नुहोस्? त्यसोभए तपाईसँग हालसालै सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरू छन्: पेपैल। सबै प्रकारका खरीदहरू गर्न इन्टरनेटको प्रयोग गर्नु नै एक माग गरिएको अभ्यास हो। त्यसकारण, फर्नीचर र सजावटी विवरण पनि यसलाई प्रविष्ट गर्नुहोस्।
चलेको छ, पार्कि find पत्ता लगाउन र लामो लाइनहरूमा प्रतीक्षा गर्नुहोस्। अब तपाईंसँग 'क्लिक' को लागी सबै चीज छ तर सावधान रहनुहोस्, सँधै सावधान हुनुहोस् कि भुक्तानका माध्यमहरूमा उनीहरूले तपाईंलाई प्रयोग गर्न दिन्छन्। Paypalकिनकि हामी भन्छौ, हाम्रो खरीद र यसको राशि सुनिश्चित गर्नका लागि एक तरिकाहरू मध्ये एक हो। तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
1 तपाईंको खाता सिर्जना गर्न अनुसरण गर्नका लागि चरणहरू
2 Paypal भुक्तानी विधि फेला पार्नुहोस् र तपाईंको फर्नीचर सुरक्षित रूपमा खरीद गर्नुहोस्
3 हाम्रो खरीदहरूमा पेपैल किन प्रयोग गर्ने?
4 के तपाईंले आफ्नो खरीद प्राप्त गर्नुभएन? Paypal तपाईंलाई मद्दत गर्दछ
5 तपाईंको मोबाइल पेपैलसँग भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको खाता सिर्जना गर्न अनुसरण गर्नका लागि चरणहरू
यदि हामी भन्छौं कि यो किनमेल गर्ने कुनै पनि उत्तम तरिकाहरूमध्ये एक हो, यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ Paypal कसरी काम गर्दछ.
यो गर्न, हामीले एउटा खाता बनाउनु पर्छ। तर चिन्ता नलिनुहोस्, किनकि यो पूर्ण रूपमा नि: शुल्क हो र तपाईको इ-मेल र पासवर्डको साथ तपाईसँग यो केही सेकेन्डमै तयार हुन्छ। यो गर्नका लागि तपाई वेबमा जानुहुनेछ, फारम भर्नुहोस्, प्रयोगका सर्तहरू स्वीकार्नुहोस् र त्यस्तै भयो।
एक पटक भित्र, तपाईं सक्नुहुन्छ तपाइँका सबै खाताहरू लि्क गर्नुहोस् र तपाइँको क्रेडिट कार्डहरू। तिनीहरूले सोध्ने डाटा थप्दै। यो सबै एक प्रकारको सूचकांकमा देखा पर्नेछ, जानकारी सँधै अप टु डेटमा र तपाइँको औंलाको टुँगोमा हुन्छ। तपाईं आफ्नो खरीदहरूको लागि कसरी भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चयन गर्न सक्नुहुनेछ, दुबै कार्ड वा खाताको साथ। दुबै केसहरूमा तपाईंको डाटा पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनेछ।
तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंसँग प्रमाणित खाता हुन्छ।
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ पेपैल शेष रकम सिधा भुक्तान गर्न। तर यदि त्यस समयमा तपाईंसँग यो छैन भने, खरीद समान तरिकाले गर्न सकिन्छ किनभने हामीले भनेका छौं, तपाईंसँग तपाईंको खाताहरू र कार्डहरू पहिले नै लिंक भएको छ।
यद्यपि तपाईंसँग प्लेटफर्ममा प्रवेश गर्न पासवर्ड छ, यो सत्य हो कि तपाईं प्रणाली सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ 'वन टच' भनिन्छ। यसले भुक्तानी प्रक्रियालाई अझ छिटो बनाउँदछ।
यी साधारण कदमहरू चाले पछि तपाईले आफ्नो फर्निचर वा सजावटका विवरणहरूको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ केवल तपाईको इ-मेल पठाईकन, यद्यपि तपाईसँग मोबाइल नम्बरको विकल्प पनि यी विकल्पहरू मध्येबाट छ। कसरी पेपैल रिचार्ज गर्ने.
Paypal भुक्तानी विधि फेला पार्नुहोस् र तपाईंको फर्नीचर सुरक्षित रूपमा खरीद गर्नुहोस्
सत्य यो हो कि जब हामी फर्नीचरको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी एउटा साधारण कफी टेबलको उल्लेख पूरा बेडरूममा गर्न सक्दछौं। त्यसोभए यो जान्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ कि यदि कुनै घटना भएमा हामी सुरक्षित हुनु आवश्यक छ। यदि तपाईंले आफ्नो फर्नीचरको लागि रोज्नु भएको छ भने, तपाईले खोज्नु पर्ने कुरा यो पृष्ठमा तपाईसँग भुक्तानी विधि पेपैल छ। विशाल बहुमतले यसलाई हाम्रो राहतमा समावेश गरिसकेको छ। एकचोटि तपाईंले यो विकल्प छनौट गर्नुभयो, तपाईंलाई ईमेलको लागि सोधिनेछ जुन तपाईं आफ्नो खातामा दर्ता गर्नुभयो। यो सबै तपाइँको पासवर्डको साथ सुरक्षित हुनेछ र अनुरोध गरिएको खाली ठाउँहरू छोपेर हामी हाम्रो खरीद पूरा गर्न सक्षम हुनेछौं। यो यति सजिलो छ र बीचमा नम्बरहरू बिना!
हाम्रो खरीदहरूमा पेपैल किन प्रयोग गर्ने?
सत्य यो हो कि यसका धेरै फाइदाहरू छन् र प्रत्येक एक पछिल्लो भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण। एक तर्फ, यो भन्नुपर्दछ कि तिनीहरूले ईन्क्रिप्शन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्छन्। यसले तिनीहरूलाई जान दिन्छ सँधै तपाइँको निजी जानकारी को रक्षा गर्नुहोस् कुनै पनि प्रकारको पृष्ठ जुन धोखाधडी हुन सक्छ। त्यसैले हामीसँग राम्रो ढाल र राम्रो सुरक्षा छ। Paypal हाम्रो बीचमा मध्यस्थको रूपमा मानिन्छ कि हामी खरीददारहरू र विक्रेता हौं। तर यो एक निष्पक्ष न्यायाधीश हो र यदि अर्डर हामी सम्म पुग्न सकेन वा सहमत भएन भने, हामी खर्च गरिएको पैसाको लागि फिर्ता पाउनेछौं। यो पहिले नै थाहा पाएर, यसले हामीलाई हाम्रो मनलाई कुनै पनि हालतमा हराउने छैन भन्ने कुरा थाहा पाउँदै मानसिक शान्ति दिन्छ।
के तपाईंले आफ्नो खरीद प्राप्त गर्नुभएन? Paypal तपाईंलाई मद्दत गर्दछ
यो सत्य हो कि जब हामी कुनै वस्तु खरिद गर्छौं हामी पहिले नै बेलको घण्टीको प्रतिक्षामा छौं कि जतिसक्दो चाँडो। हामी विशेष गरी उत्साहित छौं र जब हामी सजावटी मुद्दाहरूको बारेमा कुरा गर्दछौं। किनभने हाम्रो घरको जीर्णोद्धार गरिएको र पूर्ण देखेर जहिले पनि अनुभवहीन न्यानोपनको अनुभूति हुन्छ। तर कहिलेकाँही यस्तो हुन्छ कि भनेका आइटमहरू आउँदैनन् वा हामीले अर्डर गरेको अनुसार अनुकूलित हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्ला?
हामीलाई चाहिन्छ पेपैललाई विवादको माध्यमबाट सम्पर्क गर्दै। त्यो क्षण देखि, करीव २० दिनको अवधि खोलिन्छ ताकि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यदि विक्रेताले यो समाधान गरेन भने, त्यसो भए यो दावी हुनेछ र जब Paypal ले पूरै पैसा फिर्ता गर्न सक्छ, यो नीतिमा घोषणा गरिए अनुसार। यो सत्य हो कि यसका लागि केहि आवश्यकताहरू हुनुपर्दछ, जे होस् खरीद को विशाल बहुमत सधैं कभर छन्, त्यसैले हामीले घोषणा गरिसकेका छौं, हामी हाम्रो पैसा पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नेछौं। त्यसैले यदि यो तपाईले अर्डर गर्नुभएको वस्तु होईन भने, यदि तपाईले यो प्रयोग भएको वा बिग्रिएको देख्नुहुन्छ वा केही उत्पादनहरूमा यो नक्कली हुन सक्छ भने, तब सबै चरणहरू पूरा हुनेछन् ताकि तपाइँको पैसा खातामा फिर्ता आयो।
तपाईंको मोबाइल पेपैलसँग भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नुहोस्
आज, बहुसंख्यक वेबसाइटहरूसँग पनि उनीहरूको अनुप्रयोग छ। यसले हामीलाई जहाँसुकै पनि मोबाइल बोक्ने अनुमति दिँदछ र यससँगै, यसबाट खरीद गर्न सक्नुहुनेको सान्त्वना। त्यसो भए, Paypal संग यो कम हुन सक्दैन। यदि यो तपाइँको लागि अधिक सहज छ, भने तपाईंले भर्खरै यसको अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र यसलाई यस्तै प्रकारले प्रयोग गर्नु सुरु गर्नु हुन्छ यदि तपाईंले कम्प्युटर मार्फत गर्नुभयो। जहिले पनि सुरक्षित खरीदहरू गर्नुभएकोमा हाम्रो ब्याकहरू सुरक्षित राखिन्छ, त्यसैले तपाईंको फर्निचर सधैं समयमै आउँदछ र तपाईं कसरी इच्छा गर्नुहुन्छ, अन्यथा, तपाईंसँग सँधै आफ्नो पैसा फिर्ता लिने विकल्प हुन्छ। र तपाईं, तपाईं पहिले नै आफ्नो भुक्तानीमा पेपैल प्रयोग गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » सजाउनुहोस् » कसरी सुरक्षित ऑनलाइन खरीद गर्न पेपैल को उपयोग गर्ने
कसरी एउटा पुरानो-शैली भित्री सजावट प्राप्त गर्न
भित्ता बिभिन्न तरीका र तरीका